Relay Stations | Myanma Radio and Television
စဉ် စက်ရုံ Analogue Power စဉ် Digital Power
၁ မြစ်ကြီနား 100 W ၁ 1 KW
၂ ဗန်းမော် 100 W ၂ 300 W
၃ ရွှေကူ 100 W ၃ 100 W
၄ မိုးကောင်း 100 W ၄ 300 W
၅ ပန်နန်းဒင် 10 W
၆ ဒေါ့ဖုန်းယန် 50 W
၇ ဆင်ဘို 50 W
၈ ရှင်ဗွေယန် 50 W ၅ 50 W
၉ မြို့လှ (ရွှေကူ) 50 W
၁၀ တနိုင်း 10 W ၆ 100 W
၁၁ လုံးတုံ 50 W ၇ 50 W
၁၂ မြို့သစ်(ဗန်းမော်) 10 W
၁၃ ချီဗွေ 10 W
၁၄ ဆွမ်ပရာဘွမ် 10 W
၁၅ ကန်ပိုက်တီး 10 W
၁၆ ဆဒုံး 10 W ၈ 50 W
၁၇ ဆော့လော် 10 W
၁၈ ကာမိုင်း 50 W ၉ 50 W
၁၉ နောင်မွန်း 50 W ၁၀ 50 W
၂၀ မချမ်းဘော 10 W
၂၁ ပန်းဝါ 10 W
၂၂ လွယ်ဂျယ် 50 W
၂၃ ခေါင်လံဖူး 10 W
၂၄ အင်ဂျန်းယန် 50 W
၂၅ နမ္မား 300 W ၁၁ 300 W
၂၆ ဖားကန့် 50 W ၁၂ 100 W
၂၇ ပူတာအို 50 W ၁၃ 100 W
၂၈ လွိုင်ကော် 1 KW ၁၄ 1 KW
၂၉ ရွာသစ် 10 W ၁၅ 50 W
၃၀ မော်ချီး 50 W
၃၁ ဘော်လခဲ 50 W ၁၆ 50 W
၃၂ ဖရူဆို 50 W ၁၇ 50 W
၃၃ မယ်စဲ့ 50 W
၃၄ ဖားဆောင်း 50 W ၁၈ 50 W
၃၅ ရှားတော 50 W ၁၉ 50 W
၃၆ လှိုင်းဘွဲ့ 300 W ၂၀ 200 W
၃၇ ပိုင်ကျုံ 10 W ၂၁ 50 W
၃၈ ဘားအံ 1 KW ၂၂3KW
၃၉ ရှမ်းရွာသစ် 50 W
၄၀ ဖာပွန် 50 W ၂၃ 50 W
၄၁ မြဝတီ 100 W ၂၄ 200 W
၄၂ ဘုရားသုံးဆူ 100 W ၂၅ 50 W
၄၃ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 50 W ၂၆ 50 W
၄၄ မြိုင်ကြီးငူ 10 W ၂၇ 50 W
၄၅ ကျိုက်ဒုံ 100 W ၂၈ 100 W
၄၆ ကနေဒီ 1 KW ၂၉ 1 KW
၄၇ ဖလမ်း 100 W ၃၀ 500W
၄၈ ဟားခါး 100 W ၃၁ 300 W
၄၉ ရိဒ်ခေါဒါရ် 10 W
၅၀ ရေဇွာ 10 W
၅၁ ကျီခါး 10 W
၅၂ တွန်းဇံ 10 W ၃၂ 50 W
၅၃ မင်းတပ် 10 W ၃၃ 50 W
၅၄ မတူပီ 10 W ၃၄ 50 W
၅၅ ပလက်ဝ 50 W
၅၆ ထန်တလန် 10 W ၃၅ 50 W
၅၇ မော်လမြိုင် 10 KW ၃၆3KW
၅၈ လမိုင်း 100 W ၃၇ 300 W
၅၉ ဘီးလင်း 1 KW ၃၈ 1 KW
၆၀ ရေး 100 W ၃၉ 300 W
၆၁ ခေါဇာ 50 W ၄၀ 50 W
၆၂ ကျောင်းရွာ 50 W
၆၃ စစ်တွေ 10 KW ၄၁3KW
၆၄ မောင်တော 1 KW ၄၂ 600 W
၆၅ သံတွဲ 500 W ၄၃ 600 W
၆၆ အမ်း 50 W ၄၄ 100 W
၆၇ တောင်ကုတ် 50 W ၄၅ 1 KW
၆၈ ဂွ 50 W ၄၆ 100 W
၆၉ မအီ 50 W ၄၇ 50 W
၇၀ ကျိန္တလီ 50 W
၇၁ ပိန္နဲတောင်3KW ၄၈3KW
၇၂ ရမ်းဗြဲ 10 W ၄၉ 50 W
၇၃ ကျောက်ဖြူ 10 W ၅၀ 50 W
၇၄ မာန်အောင် 10 W
၇၅ ကျောက်တော် 500 W ၅၁ 600 W
၇၆ လားမူ 50 W ၅၂ 50 W
၇၇ မင်းတက်(ရှောက်ချုံ) ၅၃ 50 W
၇၈ မြောက်ဦး ၅၄ 300 W
၇၉ တောင်ကြီး 10 KW ၅၅3KW
၈၀ ကွန်ဟိန်း 10 W ၅၆ 50 W
၈၁ မိုးနဲ 50 W ၅၇ 50 W
၈၂ လင်းခေး 50 W ၅၈ 100 W
၈၃ မိုင်းပန် 10 W ၅၉ 50 W
၈၄ လဲချား 50 W ၆၀ 100 W
၈၅ ကျေးသီး 10 W
၈၆ ပင်လောင်း 50 W ၆၁ 50 W
၈၇ ဟိုမိန်း 50 W
၈၈ ဝမ်ဟတ် 10 W ၆၂ 50 W
၈၉ မောက်မယ် 10 W ၆၃ 50 W
၉၀ မိုင်းကိုင် 50 W ၆၄ 50 W
၉၁ နောင်ထော် 10 W
၉၂ ဝမ်ဟိုင်း 50 W
၉၃ ကျိုင်းတောင်း 10 W ၆၅ 50 W
၉၄ နားရိုင်း 10 W
၉၅ မိုင်းနောင် 50 W ၆၆ 50 W
၉၆ ရွာငံ 50 W ၆၇ 50 W
၉၇ မိုင်းရှူး 10 W
၉၈ နောင်ဝိုး 50 W
၉၉ ဝမ်ပန် 10 W
၁၀၀ မိုင်းစံ 50 W
၁၀၁ ကျောက်ဂူ 50 W
၁၀၂ ခိုလမ် 50 W ၆၈ 50 W
၁၀၃ ကာလိ 50 W ၆၉ 50 W
၁၀၄ ဖယ်ခုံ 50 W
၁၀၅ မုံးထ 50 W
၁၀၆ လားရှိုး 300 W ၇၀ 1 KW
၁၀၇ ကွတ်ခိုင် 10 W ၇၁ 100 W
၁၀၈ ကျောက်မဲ 50 W ၇၂ 100 W
၁၀၉ တန့်ယန်း 50 W ၇၃ 50 W
၁၁၀ နမ့်ဆန် 10 W ၇၄ 50 W
၁၁၁ မိုင်းရယ် 10 W ၇၅ 50 W
၁၁၂ နမ့်လန် 10 W ၇၆ 50 W
၁၁၃ တာမိုးညဲ 10 W ၇၇ 50 W
၁၁၄ သီပေါ 100 W ၇၈ 100 W
၁၁၅ ကောင်းခါး 50 W
၁၁၆ မန်တုံ 50 W ၇၉ 50 W
၁၁၇ နောင်ချို 100 W ၈၀ 100 W
၁၁၈ သိန္နီ 50 W ၈၁ 100 W
၁၁၉ နမ့်စလပ် 10 W
၁၂၀ ဆင်ကျော့ 10 W
၁၂၁ ပန်ဖိန်း 50 W
၁၂၂ ဝင်းကောင် 10 W
၁၂၃ ပန်ဆန်း 100 W
၁၂၄ မုံးစီး 10 W
၁၂၅ နောင်လိုင် 100 W
၁၂၆ မိုင်းယော် 10 W
၁၂၇ မိုင်းငေါ့ 10 W
၁၂၈ နမ္မတူ 50 W ၈၂ 100 W
၁၂၉ နမ့်ပေါင် 50 W
၁၃၀ မိုင်းလုံ 50 W
၁၃၁ ကွမ်လုံ 100 W ၈၃ 300 W
၁၃၂ ချင်းရွှေဟော် 10 W ၈၄ 50 W
၁၃၃ လောက်ကိုင် 300 W ၈၅ 300 W
၁၃၄ ကုန်းကြမ်း 10 W
၁၃၅ ဝလင်း 10 W
၁၃၆ မိုင်းမော 100 W
၁၃၇ ပန်လုံ 50 W
၁၃၈ မော်ထိုက် 50 W
၁၃၉ မူဆယ် 350 W ၈၆ 600 W
၁၄၀ နမ့်ခမ်း 10 W ၈၇ 50 W
၁၄၁ မုံးကိုး 50 W
၁၄၂ မုံးပေါ် 50 W
၁၄၃ ကြူကုတ် 10 W ၈၈ 100 W
၁၄၄ နမ့်ဖတ်ကာ 10 W ၈၉ 50 W
၁၄၅ ဖောင်းဆိုင် 10 W
၁၄၆ မုံးဝီး 10 W
၁၄၇ မိုးမိတ် 100 W
၁၄၈ မဘိမ်း 50 W
၁၄၉ မိုင်းယု(၁၀၅မိုင်) 50 W
၁၅၀ မန်ဟီးရိုး 50 W
၁၅၁ ကျိုင်းတုံ 300 W ၉၀ 150 W
၁၅၂ မိုင်းပြင်း 10 W
၁၅၃ တာချီလိတ် 50 W ၉၁ 300 W
၁၅၄ တာလေ 10 W
၁၅၅ မိုင်းခတ် 10 W
၁၅၆ မိုင်းဆတ် 50 W ၉၂ 50 W
၁၅၇ မိုင်းဖြတ် 50 W ၉၃ 50 W
၁၅၈ မိုင်းယောင်း 50 W
၁၅၉ မိုင်းယု 50 W
၁၆၀ မိုင်းယန်း 10 W ၉၄ 50 W
၁၆၁ မိုင်းပါလျှိုး 10 W ၉၅ 50 W
၁၆၂ ကျိုင်းလပ် 10 W
၁၆၃ မိုင်းခုတ် 10 W
၁၆၄ တုံတာ 10 W
၁၆၅ မက်မန်း 10 W
၁၆၆ မိုင်းယွန်း 10 W
၁၆၇ ဝမ်ပုံ 100 W
၁၆၈ မိုင်းမ 10 W
၁၆၉ မိုင်းဖျန် 10 W
၁၇၀ မိုင်းပေါက် 10 W
၁၇၁ မိုင်းကာ 10 W
၁၇၂ မိုင်းလား 50 W
၁၇၃ ဆီလူး 10 W
၁၇၄ မိုင်းတုံ 50 W
၁၇၅ ပုံပါကျင် 10 W
၁၇၆ စစ်ကိုင်း 10 KW ၉၆3KW
၁၇၇ ခန္တီး 300 W ၉၇ 300 W
၁၇၈ ကသာ 100 W ၉၈ 300 W
၁၇၉ ထီးချိုင့် 100 W ၉၉ 300 W
၁၈၀ ကောလင်း 100 W ၁၀၀ 50 W
၁၈၁ ဝန်းသို 100 W ၁၀၁ 600 W
၁၈၂ မုံရွာ3KW ၁၀၂ 1 KW
၁၈၃ ကန့်ဘလူ 100 W ၁၀၃ 300 W
၁၈၄ ပင်လယ်ဘူး 50 W ၁၀၄ 50 W
၁၈၅ ကြာပင်(မင်းကင်း) 50 W
၁၈၆ ဗန်းမောက် 100 W ၁၀၅ 50 W
၁၈၇ ရေဦး3KW ၁၀၆3KW
၁၈၈ ခမ်းပတ် 10 W ၁၀၇ 50 W
၁၈၉ မော်လိုက် 100 W ၁၀၈ 100 W
၁၉၀ ဖောင်းပြင် 50 W ၁၀၉ 100 W
၁၉၁ မြို့သစ်(တမူး) 50 W
၁၉၂ ဒုံဟီး 50 W
၁၉၃ မိုပိုင်းလွတ် 50 W
၁၉၄ ဟုမ္မလင်း 500 W ၁၁၀ 600 W
၁၉၅ မင်းသာ 50 W
၁၉၆ တမူး 50 W ၁၁၁ 50 W
၁၉၇ လေရှီး 10 W
၁၉၈ လဟယ် 10 W
၁၉၉ နန်းယွန်း 10 W ၁၁၂ 50 W
၂၀၀ ပန်ဆောင် 10 W ၁၁၃ 50 W
၂၀၁ ပန်ဆပ် 10 W
၂၀၂ ဆောလော 10 W
၂၀၃ အင်းတော် 100 W ၁၁၄ 100 W
၂၀၄ ထန်ပါခွေ 50 W
၂၀၅ မြိတ် 300 W ၁၁၅3KW
၂၀၆ ထားဝယ် 1 KW ၁၁၆ 1 KW
၂၀၇ မေတ္တာ 100 W
၂၀၈ ခမောက်ကြီး 10 W
၂၀၉ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင် 10 W
၂၁၀ ပလောက် 50 W
၂၁၁ ဘုတ်ပြင်း 50 W ၁၁၇ 50 W
၂၁၂ ကလိန်အောင် 50 W
၂၁၃ တနင်္သာရီ 50 W
၂၁၄ ကရသူရိ 10 W
၂၁၅ ပုလော 50 W
၂၁၆ တကူ(သရဘွင်) 10 W
၂၁၇ မာရမ်း 50 W
၂၁၈ ဟိန္နား 100 W
၂၁၉ ချန်းဖန်း 50 W
၂၂၀ ကော့သောင်း 50 W ၁၁၈ 300 W
၂၂၁ အောင်ဘာ 50 W
၂၂၂ ပဲဒက် ၁၁၉ 100 W
၂၂၃ ပြည် 10 KW ၁၂၀3KW
၂၂၄ တောင်ငူ 10 KW ၁၂၁3KW
၂၂၅ ပဲခူး 150 W ၁၂၂3KW
၂၂၆ မင်းလှ3KW ၁၂၃3KW
၂၂၇ ညောင်လေးပင် 350 W ၁၂၄3KW
၂၂၈ မင်းဘူး 10 KW ၁၂၅3KW
၂၂၉ ဂန့်ဂေါ 50 W ၁၂၆ 100 W
၂၃၀ ဆော 50 W ၁၂၇ 50 W
၂၃၁ ကျောက်ထု 50 W
၂၃၂ ထီးလင်း 100 W ၁၂၈ 100 W
၂၃၃ ပေါက် 100 W ၁၂၉ 100 W
၂၃၄ ပခုက္ကူ3KW ၁၃၀3KW
၂၃၅ မင်းတုန်း 300 W ၁၃၁ 300 W
၂၃၆ တောင်တွင်းကြီး3KW ၁၃၂3KW
၂၃၇ အောင်လံ ၁၃၃ 600 W
၂၃၈ ချောက် ၁၃၄ 300 W
၂၃၉ ပုပ္ပါး5KW ၁၃၅3KW
၂၄၀ ပြင်ဦးလွင် 300 W ၁၃၆ 600 W
၂၄၁ ပျဉ်းမနား 800W ၁၃၇3KW
၂၄၂ တကောင်း 10 W ၁၃၈ 50 W
၂၄၃ သပိတ်ကျင်း 100 W ၁၃၉ 50 W
၂၄၄ တပ်ကုန်း3KW ၁၄၀3KW
၂၄၅ မိတ္ထီလာ3KW ၁၄၁3KW
၂၄၆ မိုးကုတ် 100 W ၁၄၂ 300 W
၂၄၇ ရန်ကုန် 10 KW ၁၄၃3KW
၂၄၈ ကိုကိုးကျွန်း 100 W
၂၄၉ ကျောင်းကုန်း 10 KW ၁၄၄3KW
၂၅၀ ဘိုကလေး 500 W ၁၄၅3KW
၂၅၁ လပွတ္တာ3KW ၁၄၆3KW
၂၅၂ ပုသိမ်3KW ၁၄၇3KW
၂၅၃ ငွေဆောင် 100 W
၂၅၄ ဟိုင်းကြီးကျွန်း 300 W ၁၄၈ 300 W
၂၅၅ ငရုတ်ကောင်း 100 W
၂၅၆ အမာ 1 KW ၁၄၉ 1 KW
၂၅၇ ဟင်္သာတ ၁၅၀ 1 KW
၂၅၈ ငပုတော ၁၅၁ 300 W
မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို FM ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ
စဉ် စက်ရုံ FM Power
၁ မြစ်ကြီနား 1 KW
၂ ဗန်းမော် 1 KW
၃ မိုးကောင်း 300 W
၄ ဖားကန့် 150 W
၅ ပူတာအို 300 W
၆ လွိုင်ကော်2KW
၇ ဘော်လခဲ 150 W
၈ ဖားဆောင်း 150 W
၉ ဘားအံ 1 KW
၁၀ မြဝတီ 300 W
၁၁ ဘုရားသုံးဆူ 150 W
၁၂ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 150 W
၁၃ ကနေဒီ2KW
၁၄ ဟားခါး 300 W
၁၅ မတူပီ 150 W
၁၆ မော်လမြိုင်2KW
၁၇ လမိုင်း 150 W
၁၈ ဘီးလင်း 1 KW
၁၉ ရေး 150 W
၂၀ စစ်တွေ2KW
၂၁ မောင်တော2KW
၂၂ သံတွဲ 1 KW
၂၃ တောင်ကုတ် 150 W
၂၄ ပိန္နဲတောင်2KW
၂၅ ကျောက်ဖြူ 300 W
၂၆ ကျောက်တော် 150 W
၂၇ တောင်ကြီး2KW
၂၈ မိုးနဲ 150 W
၂၉ လင်းခေး 150 W
၃၀ မိုင်းပန် 150 W
၃၁ မောက်မယ် 150 W
၃၂ ရွာငံ 150 W
၃၃ လားရှိုး2KW
၃၄ ကွတ်ခိုင် 150 W
၃၅ သီပေါ 300 W
၃၆ နောင်ချို 150 W
၃၇ သိန္နီ 150 W
၃၈ ကွမ်လုံ 300 W
၃၉ မူဆယ် 300 W
၄၀ နမ့်ခမ်း 150 W
၄၁ ကျိုင်းတုံ 300 W
၄၂ တာချီလိတ် 300 W
၄၃ မိုင်းဆတ် 150 W
၄၄ စစ်ကိုင်း2KW
၄၅ ခန္တီး 1 KW
၄၆ ကသာ 150 W
၄၇ ထီးချိုင့် 150 W
၄၈ ကောလင်း 150 W
၄၉ မုံရွာ 1 KW
၅၀ ကန့်ဘလူ 300 W
၅၁ ပင်လယ်ဘူး 150 W
၅၂ ရေဦး2KW
၅၃ ဟုမ္မလင်း 150 W
၅၄ မြိတ်2KW
၅၅ ထားဝယ်2KW
၅၆ တနင်္သာရီ 150 W
၅၇ ဟိန္နား 150 W
၅၈ ကော့သောင်း 1 KW
၅၉ ပြည်2KW
၆၀ တောင်ငူ2KW
၆၁ ပဲခူး2KW
၆၂ မင်းလှ 1 KW
၆၃ ညောင်လေးပင်2KW
၆၄ မင်းဘူး2KW
၆၅ ဆော 150 W
၆၆ ပခုက္ကူ2KW
၆၇ တောင်တွင်းကြီး2KW
၆၈ ပုပ္ပါး2KW
၆၉ ပြင်ဦးလွင် 1 KW
၇၀ ပျဉ်းမနား2KW
၇၁ သပိတ်ကျင်း 150 W
၇၂ တပ်ကုန်း2KW
၇၃ မိတ္ထီလာ 1 KW
၇၄ မိုးကုတ် 300 W
၇၅ ရန်ကုန်2KW
၇၆ ကျောင်းကုန်း2KW
၇၇ ဘိုကလေး2KW
၇၈ လပွတ္တာ2KW
၇၉ ပုသိမ်2KW
၈၀ ငွေဆောင် 500W
၈၁ ဟိုင်းကြီးကျွန်း 500 W
၈၂ အမာ 1 KW
၈၃ ဟင်္သာတ 1 KW
မြန်မာ့အသံနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်သည့်
လှိုင်းတို၊ လှိုင်းလတ် စက်ရုံများ
စဉ် စက်ရုံ လှိုင်းတို လွှင့်စက် လှိုင်းလတ် လွှင့်စက်
လွှင့်အား လှိုင်းနှုန်း အရေအတွက် လွှင့်အား လှိုင်းနှုန်း အရေအတွက်
၁။ နေပြည်တော်(တပ်ကုန်း) 50 KW 5915 KHz2Nos. 200 KW 594 KHz 1 No.
Tine Yin Thar Radio (Morning
to Night) Myanma Radio (Morning
400 KW 594 KHz 1 No.
၂။ ရန်ကုန် (ရေကူး) 50 KW 5985 KHz 1 No. 100 KW 576 KHz 1 No.
Myanma Radio (Morning) Myanma
50 KW 9730 KHz 1 No. 100 KW 729 KHz 1 No.
Radio (Day) Lower
50 KW 5985 KHz 1 No. 200 KW 576 KHz 1 No.
Radio (Night) Myanma